उमेर अनुसार, कति हुनुपर्छ शरीरमा र´क्तचापको मात्रा, जानिराखौं ! – Butwal Sandesh
उमेर अनुसार, कति हुनुपर्छ शरीरमा र´क्तचापको मात्रा, जानिराखौं !
गलत खानपान र जीवनशैलीका कारण आजभोली मानिसहरु हाई एवम लो ब्लोड प्रेसरको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन। शरीरमा रक्तचापको मात्रा बढी होस् या घटी दुवै स्वास्थ्यका लागि हा´निकारक छ। यो हरेक समय घट्ने बढ्ने अवस्थामा रहन्छ। तर अधिकांश मानिसलाई यो कुरा थाहा नहुन सक्छ कि वास्तवमा हाम्रो शरीरको सामान्य रक्तचाप कति हुनुपर्छ भनेर। डाक्टरको मान्यता अनुसार हेरक व्यक्तिले आफ्नो उमेर अनुसार शरीरमा रक्तचाप नियन्त्रण गरेर राख्नु आवश्यक हुन्छ।
यसै सन्दर्भमा आज हामी उमेर अनुसार शरीरको रक्तचाप कति हुनुपर्छ त साथै यसलाई नियन्त्रणमा कसरी राख्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा कुरा गर्न जादैछौ, आउनुहोस एकै छिन चर्चा गरौँ ;
रक्तनलीमा पर्न जाने रगतको प्रभावलाई सामान्य अर्थमा रक्तचाप भन्ने गरिन्छ। हाई ब्लड प्रेसरमा रगतको दबाव बढी र लो ब्लड प्रेसरमा रगतको दबाव कम हुने गर्छ। हाई होस् या लो दुवै प्रकारको ब्लड प्रेसर भएको खण्डमा तुरुन्तै उपचार गराउनु आवश्यक छ।
उमेरको हिसाबले कति हुनुपर्छ ब्लड प्रेसर
एक स्वस्थ व्यक्तिको शरीरको सामान्य रक्तचाप १२०/ ८० mmHg लाई मान्ने गरिन्छ। तर यो स्थिति बच्चाको हकमा भने लागु हुदैन। किनकि बच्चाको शरिरको रक्तचापमा गडबड भईराख्छ।
१५ देखि २४ बर्षसम्म
१५ देखि २४ बर्षसम्मका उमेर समुहका पुरुषमा ११७-७७ mmHg र महिलामा १२०-८५ mmHg रक्तचाप हुनु आवश्यक छ। यसैमा तपाईको उमेर १९ देखि २४ छ भने पुरुषमा १२०-७९mmHg र महिलामा पनि १२०-७९mmHg रक्तचाप हुनु जरुरी छ।
२५ देखि २९ बर्षसम्म
२५ देखि २९ वर्ष उमेर समुहका महिलाको सामान्य रक्तचाप १२०/८० mmHg हुनु आवश्यक छ भने पुरुषको सामान्य रक्तचाप पनि १२०/८०mmHg हुनु पर्दछ।
३० देखि ३९ बर्षसम्म
यस उमेर अवधिमा शरीरमा हाई एवम लो ब्लड प्रेसरको समस्या सबैभन्दा बढी हुने गर्छ। त्यसैले रक्तचापको सम्बन्धमा यो उमेर समुहका व्यक्तिले हमेशा ख्याल राख्नु आवश्यक छ। ३० देखि ३९ सम्मका उमेर समुहका पुरुषको सामान्य रक्तचाप १२२/८१mmHg र महिलाको सामान्य रक्तचाप १२३/८२ mmHg हुनु पर्दछ। साथै ३६ देखि ३९ सम्मका उमेर समुहका पुरुषको ब्लड शरीरको रक्तचाप १२३/८२mmHg र महिलाको १२७/८४ mmHg सम्म हुनु पर्दछ।
४० देखि ४९ बर्षसम्म
४० देखि ४९ सम्मका पुरुषको रक्तचाप १२४/८३mmHg र महिलाको सामान्य रक्तचाप १२५/८३ mmHg हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। साथै ४६ देखि ४९ उमेर समुहका पुरुषको सामान्य रक्तचाप १२६/८४ र महिलाको १२७/८४ mmHg हुनु आवश्यक छ।
५० देखि ५९ बर्षसम्म
विशेषगरी यस उमेर समुहका व्यक्तिहरुले ब्लड प्रेशरको सन्दर्भमा बिशेष ख्यला राख्नु पर्दछ। ५० देखि ५५ बर्षसम्मका पुरुषको शरिरको रक्तचाप १२८/८५ mmHg र महिलाको १२९/८५mmHg सम्म हुनुलाई सामान्य मान्ने गरिन्छ।
५६ देखि ५९ बर्षसम्म
५६ देखि ५९ सम्मका उमेर समुहको पुरुषको शरीरको सामान्य रक्तचाप १३१/३७mmHg र महिलाको १३०/८६ mmHg हुनु आवश्यक छ।
६० या सो भन्दा माथि
६० या सो भन्दा माथिका उमेर समुहका पुरुषको सामान्य अवस्थामा शरीरमा रक्तचापको मात्रा १३५/८८mmHg र महिलामा १३४/८४mmHg हुनुलाई राम्रो मानिन्छ।
ब्लड प्रेसरलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ त ?
शरीरमा रक्तचापको मात्रा नियन्त्रणमा राख्नका लागि फास्ट फुडको सट्टामा घरमा नै बनेको खानेकुराको सेवन गर्नु आवश्यक छ। बजारको समान खरिद गर्ने समयमा पनि यसको गुणस्तर र सोडियमको मात्रा परिक्षण गरेर मात्र किन्नु आवश्यक छ। -दहि , दुध एवम अन्य चिल्लो पदार्थयुक्त खानेकुराको सेवन -पत्तेदार सब्जी , ब्रोकाउली , केरा , तर्बुजा जस्ता सब्जी एवम फलको सेवन
-लसुन मुटुको लागि फाइदाजनक रहेको छ। यसको सेवनले शरीरमा रक्तसंचार नियमित हुनका साथै ब्लड प्रेसर नियन्त्रणमा राख्नमा समेत सहयोग पुर्याउछ। – बिहानको समयमा रक्तचाप बढ्ने समस्या छ भने १ गिलास चुकन्दरको जुस पिउनु पर्दछ। रक्तचाप बढेको अवस्थामा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि आधा गिलास पानीमा निबुवाको रस निचोरेर २ घण्टा पश्चात सेवन गर्नु पर्दछ।